ဂေဇက်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရသူများ။ ကြည့်လိုရပြီးမန်ဘာဝင်လို့ မရသူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ဂေဇက်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရသူများ။ ကြည့်လိုရပြီးမန်ဘာဝင်လို့ မရသူများအတွက်
ဂေဇက်ကိုဝင်ကြည့်လို့မရသူများ။ ကြည့်လိုရပြီးမန်ဘာဝင်လို့ မရသူများအတွက်
Posted by မိုးနတ်သားလေး on Dec 25, 2011 in Computers & Technology, Know-How, DIY, Myanmar Gazette |7comments
If cookies in your browser are enabled and you’re still seeing an error message that your browser’s cookie functionality is turned off, try openinganew window in your browser. Sometimesabrowser’s cookies will not work properly when you are using multiple tabs inabrowser window.'(ဒီစာလေးလုပ်ပုံလုပ်နည်းအပေါ်ကအတိုင်းမရတောဘူးဆိုရင်toolကလစ်လိုက်ပါပြီးရင် စာကြောင်း၈ကြောင်းကျတဲ့အထဲကclear recent history ထပ်ကလစ်လိုက်ပါသင်ကိုဖျက်မဲ့ ဟာတွေမေးပါလိမ်မယ်ဘယ်နှစ်ရက်ဟာတွေ ဖျက်မလဲအရာအာလုံးကိုဖျက်မယ်ဆိုပြီးeverthingပြောင်းပေးပြီးအောက်ကကုလာကြီးကလစ်လိုက်ပါ)ပြီးရင် အပေါ်ကနည်းအတိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်ပါ အိုကေပါလိမ့်မယ်နော်) အပေါ်ကနည်းများလုပ်လိုမရသူများအတွက်
၀င်လိုမရခြင်းရြ့ပြသာနာအကြောင်းအရင်းကလည်း ကုလားကြီးကိုကလစ်လုပ်လိုက်မိကြတယ်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ်
နတ်သားလေးတနေ့ကရွာထဲဝင်တော့ရွာသား အကိုတယောက်ကဂေဇက်ထဲဝင်လိုမရဘူးပြောနေတာကို သိလိုဝင်လိုရမဲ့နည်းလမ်းတခုပေးလိုက်ပါတယ်။တခါတလေcookies ပိတ်သွားမျိုးဖြစ်တက်ပါတယ် အဒါကြောင့်ကိုယ်သုံးတဲ့အမျိုးအစားအလိုက်ဖြေရှင်းနည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
စာကြောင်း၈ကြောင်းကျတဲ့အထဲကclear recent history ထပ်ကလစ်လိုက်ပါသင်ကိုဖျက်မဲ့ဟာတွေမေးပါလိမ်မယ်
ကျွန်တော်က laptop တစ်လုံးထဲနဲ့ ရုံးမှာကော အ်ိမ်မှာပါ ၀င်တာပါ။ အရင် က ဘယ်မှာ ၀င်ဝင်ရပါတယ် ။ ၀င်လို့ မရတာ ဒီနေ့ပါနဲ့ဆို လေးရက် ဘဲ ရှိပါသေးတယ် ။
ရုံးမှာ ၀င်လို့ရပြီး အိမ်မှာ ၀င်လို့မရတာပါ။ Address မှားရိုက်မိတာမျိုးဖြစ်မှာ စိုးလို့ လည်း book mark လုပ်ထားပြီး အဲ့ဒီ့ကနေ ဘဲ ၀င်ပါတယ်။
Computer ပြသနာဖြစ်မှာစိုးလို့ အခြား စက်များနဲ့ပါ ၀င်ကြည့်ပါတယ် ။ မရပါ။ Same problem ပါ။
ကျွန်တော်က Mozilla Fire Fox သုံးပြီး ဂေဇက်ခေါ်လိုက်ရင် ဘားထဲမှာ http://myanmargazette.net/ သာပေါ်ပါတယ် ။ Page က totally blank ဖြစ်နေပါတယ်။
ပုံမှန် ၀င်လို့ရရင် အဲ့ဒီ့ ဘားမှာ The Mandalaygazette-Myanmar ……….စသဖြင့် ပေါ်ပါတယ်။
အခု ကျွန်တော် stupidcensorship.com proxy သုံးပြီး ကျော်ဝင်ကြည့်တာ ၀င်လို့ ရသွားပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ က ဖြစ်တာနေမှာစိုးလို့ အခြား ကွန်ပြူတာများနဲ့ စမ်းပေမဲ့လည်းမရပါ။
ဒီမနက်က proxy ခံပြီး ကျော်ဝင်ကြည့်တော့ ရပါတယ်။ ၀င် ဖတ်လို့ ရပါတယ် ။
ရုံး ကနေ တော့ ၀င်လို့ရပါတယ်။
စဉ်းစားလို့ ရတာများရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး ။
အဘလည်း ဒီလိုပြဿနာမျိုး ကြုံနေတယ် ။
Mandalay Gazette တင်မကဘူး Dr. Lun Swe ပါ ဝင်လို့မရဘူး ။
Red Link ( 551162 ) ကို မနေ့ညကပဲ
ကိုယ့်ရဲ့ နာမည်မှန် နှင့် Phone Nr ပါပေးပြီး complaint တက်ထားတယ် ။
သူတို့က main ISP ( Internet Service Provider ရတနာပုံတယ်လီပို့ ) ကြောင့်လို့ပြောတယ် ။
B tunnel တို့ stupidcensorship တို့ကနေပဲ ကျော်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးတယ် ။
” သူများ ISP တွေရပြီး ခင်ဗျားတို့ ISP ကမရတာ ခင်ဗျားတို့ ညံ့လို့ပေါ့ ၊
ခင်ဗျားတို့ Red Link ကို သုံးမိတာ စိတ်ပျက် နောင်တရတယ် လို့ပြောခဲ့တယ် ”
သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Red Link ကို မသုံးဖို့ အမြန်ဆုံး သတိပေးရဦးမယ် ။
stupidcensorship ကနေလည်း Log in ဝင်လို့ ရပါတယ် ။
Connection အရမ်းကောင်းနေတဲ့ အချိန် တော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် ။
ဒါတောင် အဘက တလ ၇၅ ဒေါ်လာတန် Enterprise Plan ယူထားတယ် ။
နဂိုကမှ လိပ် လိုနှေးနေတဲ့ Internet ကို
နောက် proxy တစ်ခု ထပ်ခံရမှတော့
ပက်ကျိ လောက်တောင် မမြန်တော့ဘူး ။
သေချင်တယ် ။ ပြန်ချင်တယ် သြဇီ ကို။
မိန်းမက မြန်မာပြည်ကို မပြန်ပါနှင့်လို့
ပြန်မိတဲ့ ကိုယ့် အပြစ်ပဲ ။ စိတ်နာတယ် ။
မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ပြီးမှ အထူး စိတ်ပျက်ရတာတွေကတော့
( ၁ ) Internet Connection & restrictions
( ၂ ) နေ့တဓူဝ လိမ်ညာပြောဖို့ ဝန်မလေး ယဉ်ပါး နေတဲ့ သူတွေနှင့် တွေ့နေရတာ ။
အဘ သြဇီ နိုင်ငံသားခံသွားရင်တော့ အဲဒီ နှစ်ချက် အဓိကပဲ ။
အခုလို မြန်မာနိုင်ငံ အရသာလေးသိသွားလျင်ဖြင့် ပြန်ပါတော့လား အဘရယ်
နဂိုထဲက မိန်းမစကားမှ နားမထောင်တာ..
ဟုတ်တယ် ဘဖော ရေ.. ကျော်ခွ ၀င်နေရတယ် ။
Dr. Lun Swe site တော့ ကျွန်တော်မသိဘူး .
အန်ကယ်ကြီး ကတော့ red link သုံးပေမဲ့ သူ တော့ ရတယ် ပြောတယ် ။
အဘ ရေ ဒီမှာ ကတော့ သူမသာ ကိုယ်အသုဘ တွေချည်းပါဘဲ။
Red link မသုံး အခြား သုံးလည်း ပြသနာဖြစ်လာရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းးး မကြိုက်ရင် မယူနဲ့ဘဲ။